Balaayin Doller Ayaa Ku Buxa Sanad Kasta - Xogside-news
Home BARNAAMIJYADA Balaayin Doller Ayaa Ku Buxa Sanad Kasta
Balaayin Doller Ayaa Ku Buxa Sanad Kasta
Avram Noam Chomsky waa oday Maraykan ah oo dhashay sanadkii 1928 aqoon sare oo PHD ku qaatay falsafadda , aqoonta maskaxda iyo sida ay u shaqayso (cognitive scientis) wakhtigan ku sugan University of Arizona ayaa qoraalo badan ka sameeyay xeelado dadka lagu kasbado oo maskxadoodana hogaanka loogu qabto si dhib yar.
Chomsky Wuxux yidhi “ Caamada waxba kama duwan caruurta, ma kala garan karaan inaad nacas tahay iyo inaad fariid tahay, waana inaad mar kasta ula hadasho sida aad adigu rabto, mar kasta u sheeg been iyo mala awaal iyo sheekoyin samaysa oo khuraafaad ah” “ Xataa haddii aad u sheegto waxaan dhici karin oo sababo ku qanciso way aaminayaa, waa inaad cabsi gelisaa taasi habka ugu fiican ee aad ku aaminsiin karto, waxa aad rabto”.
Dal kasta iyo goob walba waxa jooga kuwo bulshada ku cabsi geliya sheekooyin ay sameeyeen iyo khurafaad aan run ahayn si ay ugu hogaansamaan dano ay leeyihiin. Qofka ku sheegaya khuraafaad iyo hadalo aan caqli iyo xikmadd ku dhisnayn marka hore ayuu og yahay inaad adigu tahay Nacas aan fikir iyo caqli midna lahayn oo la gashan karo hadba wixii la doono, iyadoo isla markaana lagu fushan karo waxa loo sawiray ee mala awaalka ah.
Previous articleNatiijada Ciyaarihii Galabta Ee Hargeysa Stadium
Next articleSirdoonkii Qarsoona